भारतको राफेल र चीनको ‘जे -२०’ लडाकू विमानमध्ये कुन वढी घातक ? यस्ता छन् बिशेषता::Best Online News Portal of Nepal
भारतको राफेल र चीनको ‘जे -२०’ लडाकू विमानमध्ये कुन वढी घातक ? यस्ता छन् बिशेषता
एजेन्सी। भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बिहीबार भनेका थिए , ‘भारतीय वायु सेनामा जोडिएको राफेल विमान सम्पूर्ण विश्व र विशेष गरी भारतको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिनेहरूका लागि कडा सन्देश हो।’
भारतीय रक्षामन्त्रीको कडा कथन पछि, फेरि यो विमानको विशेषता र फायरपावरलाई विश्वका अन्य लडाकुहरूसँग टिभी च्यानल र सोशल मिडियामा तुलना गरिएको छ।
जब भारत र चीनबीचको सीमा विवाद चरम सीमामा छ, यी विमानहरू एक समयमा भारतीय वायु सेनामा सम्मिलित भएका छन् । बिबिसीका अनुसार यस्तो अवस्थामा, भारतको उत्कृष्ट लडाकू विमान राफेलले चीनको ‘चेङ्डु जे -२०’ लाई हराउन सक्षम हुनेछ कि भनेर जान्न कोशिस गरिरहेका छन्।
चीनले उसको लडाकू विमान जे -२० जस्ता विमानहरू अमेरिकासँग मात्र भएको दाबी गरेको छ।
कुन बढी भरपर्दो छ?
राफेल एक लडाकू विमान हो, यसको उत्कृष्ट प्रदर्शनको कारण विश्वभरि चर्चा छ । प्राविधिक पक्षहरूको कुरा गर्दा, राफेल आणविक मिसाइलहरू पुर्‍याउन सक्षम छ।
योसँग विश्वको सबैभन्दा विलासी र उत्तम हतियारहरू प्रयोग गर्ने क्षमता छ।
यसमा दुई प्रकारका क्षेप्यास्त्रहरू छन्, जसमध्ये एकको दायरा डेढ किलोमिटर र अर्कोमा करिब सय किलोमिटर छ। आणविक हतियारहरूले सुसज्जित राफेलले हावाबाट वायुमा १५० किलोमिटरसम्मका मिसाइलहरू फायर गर्न सक्दछन् र यसको फायरपावर हावाबाट जमीनसम्म ३०० किलोमिटर छ।
यस विमानको उचाइ जमीनबाट ५.३० मिटर र लम्बाई १५.३० मिटर छ। राफेल अहिलेसम्म अफगानिस्तान, लिबिया, माली, इराक र सिरियाको युद्धमा प्रयोग भइरहेको छ। यी युद्धहरूमा, यो विमानले यसको क्षमताको फलाम बनाएको छ।
तर यो चेङ्डु जे -२०’को ममिला होइन । चेङ्डुअहिलेसम्म विश्वमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेको छैन।
एक रक्षा विज्ञ राहुल बेदी भन्छन्, “चेङ्डुको क्षमता अहिलेसम्म विश्वमा प्रकट भएको छैन। यसको पहिलो परीक्षण २०११ मा गरिएको थियो र यो सेप्टेम्बर-अक्टुबर २०११ मा सेवामा आएको हो। र यसको पहिलो लडाई इकाई २०१८ मा बनेको छ। यस्तो अवस्थामा, यसको प्राविधिक क्षमता अहिलेसम्म विश्वमा प्रकट भएको छैन। तर राफेलको गुणस्तर अफगानिस्तानमा प्रयोग भएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रविधि स्तरमा बढी पारदर्शिता रहेको छ।’
कुन विमान बढी अत्याधुनिक छ ?
दुई विमानबीच एक फरक यो हो कि राफेल ४.५ जेनरेशन हो तर जे -२० पाँचौं जेनरेशन लडाकू विमान हो।
राहुल बेदी भन्छन्, ‘भारतको राफेल ४.५ जेनरेशन पुस्ताको लड़ाकू विमान हो। चिनियाँ सरकारले शक्तिशाली (टाक्टावर) ड्र्यागनको नामले लोकप्रिय चेङ्डु जे -२० को बारेमा बताएको कुरा यो पाँचौं पुस्ताका लडाकू विमान हो।
वर्तमानमा, विश्वमा केवल तीनवटा विमानहरू पाँचौं पुस्ताका हुन्। एउटा जे -२० र अन्य दुई अमेरिकासँग छन् – एफ -२२ र एफ -३५ । यी दुईवटा विमानहरू एकै छन्। राफेलको विशेषता भनेको उसको मिसाइल प्रणाली हो। त्यहाँ एक उल्का मिसाइल छ जसले हावाबाट हावामा १५० सय किलोमिटरको दूरीमा पनि अन्य विमानहरूलाई आक्रमण गर्न सक्छ।
योसँग अर्को लामो दूरीको मिसाइल स्क्याल्प छ, जसको दायरा ५५० देखी ६०० किमि छ। त्यहाँ छोटो दूरीको मिसाइल पनि छ, जहाँ बीसदेखि तीस किलोमिटरको दायरा हुन्छ। यो मिसाइल प्रणाली एकदम आधुनिक छ।
यसै समयमा, जब जे -२० को मिसाइल प्रणालीको कुरा आउँछ, यससँग छोटो तथा लामो दूरीको र एयर-टु-एयर मिसाइल प्रणाली छ। तर धेरै मानिस जे -२० को मिसाइल प्रणालीको क्षमतामा शंका गर्छन्। ‘
रक्षा विशेषज्ञ सी. उदय भास्कर पनि राफेल जे -२० भन्दा शक्तिशाली ठान्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘राफेल प्राविधिक आधारमा जे -२० भन्दा बढी भरपर्दो छ। दुईवटा विमानलाई विभिन्न पक्षमा तुलना गर्दा राफेलको स्टिल्ट टेक्नोलोजी, युक्तिभक्ति, र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने क्षमता, ग्राउन्ड स्टेशन र सबै विमानहरूसँग सूचना आदान प्रदान गर्ने क्षमता। हाम्रो क्षेत्रलाई राफेल जे २० सहित मिसाइल प्रणालीहरु भन्दा राम्रो मानिन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा यो हो कि जे -२० अहिले सम्म कुनै पनि परिचालन भूमिकामा परीक्षण गरिएको छैन।’
प्राविधिक भिन्नता के हो?
यदि प्राविधिक पक्षहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ दुईवटा विमानहरूका बीचमा केही भिन्नताहरू छन्। तर चीनबाट पुष्टि गरिएको जानकारीको अभावका कारण विज्ञहरू जे -२० का क्षमताहरूको बारेमा विश्वस्त छैनन्।
भास्कर भन्छन्, ‘यदि हामी यी दुईवटा विमानको दायराको बारेमा कुरा गर्छौं भने जे -२० को दायरा अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। उही समयमा रफालको दायरा ३७०० किमि छ। दुबैको गतिमा सूक्ष्म भिन्नता छ। जे -२० चाही २२२० किलोमिटरको दायरामा पुग्ने भनिएको छ।
त्यहि समयमा राफलको गति २१३० किलोमिटर छ। तर राफेलको साइज जे २० भन्दा सानो र हल्का छ। उदाहरणका लागि, जे २० को वजन १९ टन छ, जबकि राफेल १०० टन। उही समयमा, जे २० को लम्बाई २० मिटर छ, जबकि राफेल १५ मिटरको छ। यस बाहेक, सबैभन्दा बढी एयरक्राफ्टमा महत्त्वपूर्ण कुरालाई ‘एक्टिभली इलेक्ट्रोनिक स्क्यान गरिएको एर्रे’ भनिन्छ।’
राहुल बेदी र उदय भास्कर दुबैले आफ्नो तरीकाले भने, ‘राफेल विमानको आगमन नियमित प्रक्रिया हो र चीन डराउनु अर्थहीन छ र लद्दाखमा भएको सीमा विवादमा तत्काल प्रभाव पार्छ।’
चीनले लद्दाखमा पठायो थप १० हजार सैनिक
भारत र चीनका विदेश मन्त्रीहरूको मस्कोमा बैठक, सफल होला त वार्ता ?
चीनले खतरनाक HQ-16 मिसाइल प्रक्षेपण गरेको भारतको आरोप, लद्दाखमा परमाणु बमवर्षकहरू परिचालन
भारतीय कूटनीतिज्ञ र सेनाले पुरानो खेल खेलेको चीनको आरोप, वार्ता भाँडिने संभावना
चीनले लद्दाखमा ‘याक’लाई जासूसी गर्न खटाएको भन्दै भारतको आशंका
चीनलाई अझै भड्काउँदै भारत, तिब्बती सैनिकको अन्त्येष्टिमा भाजपाका महासचिव
विवादित हिमाली सीमामा भारत र चिनियाँ सेनाबीच फेरी गोलाबारी
लद्दाख सीमा विवाद: झडपमा फेरि भारतीय सैनिक मारिए